ငါဂီတ Love — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
တိုင်းယခုပြီးတော့ငါပြန် သွား. နေသူတို့ကိုငါကြားသိသောအခါတကယ်အနုပညာနှင့်ဝိညာဉ်ရေးအကြှနျုပျကိုပြောင်းရွေ့ကြောင်းအယ်လ်ဘမ်နှင့်သီချင်းတွေကိုနားမထောငျ. သူတို့အားအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ Solus ခရစ်စီမံကိန်း ရှေးလင်နန်အားဖြင့်. ဒါဟာငါ့အကြိုက်ဆုံးဟစ်ဟော့အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်- ကာလ. ထုတ်လုပ်မှုထူးခြားသောဖြစ်ပါသည် (ငြာများကိုမသော်လည်း), အကြောင်းအရာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ရှေးရဲ့ Lyrics ကျွမ်းကျင်မှုအပြည့်အဝပြသသည်. ဒီအဆိုတော်တွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့မေးမြန်းစေသည်သူတို့အားအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, "အဘယ်ကြောင့်ငါနေဆဲနောက်တဖန် rapping ပါ၏?”
ငါသည်ဤပို့စ်တွင်တပြင်လုံးကိုစံချိန်တင်ကိုးကားမနိုင်, ဒါပေမဲ့ဒီမှာအယ်လ်ဘမ်မှငါ့အကြိုက်ဆုံးကျမ်းပိုဒ်၏တဦးတည်းရဲ့. ဒါဟာမိုက်ကရိုဖုန်း "ကနေရှေးရဲ့အခနျးငယျ 1,2 Check င်″:
သူကတစ်ဦးရွေးနုတ်ဖိုးအဖြစ်သူ၏ဘဝ ပေး., ငါဖောင်းပွတယ်ငါကခုန်နေတယ်
တစ်ဦးကစစ်မှန်တဲ့ Anomaly- သူသုံးသပ်နိုင်ပါတယ်
ဘုရားသခငျ့ယရှေုသညျဘုနျးကွီးသောကြည့်ရှုစေရန် directing သောကစား
ထို, ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများ, အစဉ်အဆက်ရေးထားသောအကြီးမြတ်ဆုံးဟစ်ဟော့ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါကဗျာကိုအစီအစဉ်များ, ထိုဝေါဟာရ, အကြောင်းအရာ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်အတိမ်အနက်ကို, စီးဆင်းမှု- ထိုသို့အားလုံးအရူးခဲ့သည်. ငါ့အစ်ကိုရှေးသုံးပြီးအတှကျဘုရားသခငျကိုခြီးမှမျးပါ. y'alls အကြိုက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်နှင့်ကျမ်းပိုဒ်အချို့ကိုဘာတွေလဲ?
Lee က • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:27 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ယခု, just try to visualize the most
JulianH • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:55 ညနေ • ပြန်ကြားချက်